Notablist: Nwepụta mmụọ na nyocha asọmpi maka ndị na-ere ahịa Email | Martech Zone
Notablist: Nwepụta mmụọ na nyocha asọmpi maka ndị na-ere ahịa Email
Thursday, January 8, 2015 Tọzdee, Nọvemba 12, 2015 Douglas Karr
Ndepụta na-ere onwe ha dị ka Igwe Nchọgharị Akwụkwọ Ozi Email, na-edepụta ihe karịrị nde akwụkwọ akụkọ ozi-e 5 nde gafere ndị nkwusa 400,000. Ngwaọrụ dị ka ndị a dị egwu maka ndị na-ese ihe na-achọ inweta mmụọ sitere na ụdị akara ma ọ bụ ndị na-ere ahịa dijitalụ chọrọ ịhụ mgbe ndị na-asọ mpi ha na-ezipụ na ụdị akwụkwọ akụkọ na azụmahịa na-agwa ha.
Ọ bụrụ na ị bụ azụmaahịa na-enweghị ego iji nwalee, ngwaọrụ ndị a nwere ike ịkacha enye aka ebe ọ bụ na ndị nkwusa buru ibu na-etinye nnukwu mbọ na ị nweta ozi ịntanetị ha nke ọma!
Notablist nwere njirimara na uru ole na ole:
Nnukwu nyocha & nzacha - Chọọ site na isiokwu, aha nzipu ozi, onye na-ezipụ adreesị ozi-e, ederede ahụ ma ọ bụ URL. Iyo site ụbọchị, Alexa n'ọkwá na ọbụna na agba.
Isiokwu Trending chaatị dị iche iche - Kpoo ọnọdụ na onye anyị na ihe nkiri usoro iheomume mmekọrịta, wee banye na oge dị mkpa na ụbọchị akọwapụtara iji lebakwuo anya.
Kwa ụbọchị - Chekwaa oge na echefula mkpọsa na ntanetị ụbọchị kwa ụbọchị nke mkpọsa ọhụrụ maka ụdị ọkacha mmasị gị.
Realtime Mmelite - Mgbasa dị maka ịchọ ozugbo a zigara ha, ma debe ya kpamkpam.
24 / 7 Support - Ha nọ ebe a mgbe ịchọrọ ha, ma ọ bụrụ maka ajụjụ, akụkọ ahụhụ ma ọ bụ nkwanye ngwaahịa.
Pụrụ ọbụna ịhụ anyị gara aga mbipụta dị!
Notablist agbakwunyela Pro, otu ọrụ dị elu nke na-agbakwụnye:
Nsonaazụ ọchụchọ oge - Ozugbo mkpọsa ahụ rutere, ọ bụ nyocha. Ọzọkwa, bọtịnụ 'Live Updates' na peeji nsonaazụ ọchụchọ ugbu a na-ahapụ gị ka ị na-enyocha nyocha ad-hoc maka ihe ọhụrụ na-abata.
Dashboard dị ndụ - Bookdebanye aha na nchọta kachasị amasị gị bụ ụzọ dị mma iji nọrọ n'elu ihe, mana ọ gaghị aka mma ma ọ bụrụ na ị ga-ahụ ha niile n'otu ebe? Dashboard dị ndụ na-eme nke ahụ: ọ na-akwado nsonaazụ maka ibe edokọbara gị n'otu echiche nke usoro iheomume nke na-aga n'ihu na-emelite ka ihe ọhụrụ batara. Were ya dị ka ndepụta Twitter maka mkpọsa akwụkwọ akụkọ na-amasị gị.
Real-oge email alerts - Thingsfọdụ ihe enweghị ike ichere. Karịsịa, ụfọdụ ihe agaghị efu. Site na iji ndozi oge, ịnwere ike ịnata ozi-e ozugbo mgbe mkpọsa ọhụụ biara maka akara ibe gị ọ bụla.
Charting ngwaọrụ Nsonaazụ ọchụchọ achọtalarị eserese chapụrụ achapụ na-egosi usoro ụbọchị 90 maka usoro ọchụchọ gị. Mana ọ na-adịkarị mkpa iji ọtụtụ okwu tụnyere ihe na-eme na ihe na-agbada, ma ọ bụ ọbụlagodi nke kachasị ewu ewu. Site na ihe nlele anya, ị nwere ike ime nke ahụ ma hụ nsonaazụ dị ka akara akara ma ọ bụ akara.
Tags: asọmpi email ọchụchọnyocha asọmpiemailkpaliri omume kacha mmanchekwa data emailemail imeweemail ihe atụemail nyocha enginenyocha emailalaakwụkwọ ozi imeweAkwụkwọ Akụkọ n'ike mmụọ nsọndepụta
W Na-emehie, Lee Ihe 4 Mere Social Media Ji emetụta SEO
Etu aga-esi kwado imewe nnabata Email na ebe ị ga-enweta enyemaka!